भर्खरै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबारे आयो नमिठो खबर — Imandarmedia.com
भर्खरै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबारे आयो नमिठो खबर
एजेन्सी। युक्रेनमा रुसी आक्रमण रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की एकाएक सम्पर्क बिहिन भएको खबर आईरहेका छन। संचार माध्यामहरुले राष्ट्रपति जेलेन्स्की मारिएका त होइनन भनि शंका गर्न थालेका छन्।
यो भन्द पहिले चेचन्या स्पेसल फोर्सले गोली हानि मर्ने प्रयास गरेको थियो। संयोगले उक्त गोल राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई नलागी उनका २ सुरक्षा गार्डलाई लागेको थियो। २ जना घटनास्थलमै मरिएका थिए।
रुसले दोस्रोपटक पनि युक्रेनमा हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। रुसी रक्षामन्त्रालयका प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनासेन्कोभले आइतबार रुसी आकाशबाट ध्वनीभन्दा १० गुणा तिव्र मिसाइल युक्रेनमा हानेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार ब्ल्याक सिबाट हानिएको कालिबर क्रुज हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र निजयान प्लान्टमा खसेको थियो। सो प्लान्टमा युक्रेनी सेनाको युद्धका क्रममा बिग्रिएको सवारी मर्मत गरिन्छ।
२ हजार किलोमिटर परसम्म मार हान्नसक्ने उक्त क्षेप्यास्त्रले जियान प्लान्ट ध्वस्त भएको बताइएको छ।यसअघि गत शनिबार पनि रुसले युक्रेनमा हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो।
सो क्षेप्यास्त्रले युक्रेनका हतियार भण्डारहरु ध्वस्त बनेको बताइएको थियो।हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परमाणु क्षमताका हुन्छन्। यो विश्वमा भर्खरै विकासित हुँदै गरेको हतियार हो।रुसले युक्रेनमा यस्ता क्षेप्यास्त्र हानेर आफ्नो हतियार परीक्षण पनि गरिरहेको विश्लेषक बताउँछन्।
यसबीचमा आइतबार अमेरिकी टेलिभिजन सीबीएसले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनसँग रुसी आक्रमणमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की मारिएको खण्डमा के हुन्छ? भनेर प्रश्न गरेको थियो।
जवाफमा ब्लिंकेनले भनेका थिए कि त्यस्तो अवस्था आएमा युक्रेनको सरकारसँग आकस्मिक योजना छ। उनले भनेका छन्, युक्रेनसँग यसको विषयमा योजना छ। म यो विषयमा विस्तारमा बताउन गइरहेको छैन।
जसरी पनि त्यहाँ सरकार रहिरहन्छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको पहिलो हप्ता राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफूलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले मार्न चाहेको बताएका थिए। यद्यपी रुससँग आफूले आत्मसमर्पण नगर्ने र देश छाडेर नभाग्ने उनले अडान लिएका थिए।
अमेरिकाका अनुसार युक्रेन रुससँग झुक्दैन र त्यहाँका राष्ट्रपति मारिए पनि नयाँ सरकारले रुसका प्रतिकार गरिरहन्छ। यता रुसले युक्रेनमा सर्वसाधारणहरुलाई निशाना बनाएको युक्रेन सरकारले बताएको छ।
यस्तै युक्रेनमा जारी रुसी हमलाका कारण अहिलेसम्म ८४७ सर्वसाधारण मारिएका छन्। राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग ओएचसीएचआरले जारी युद्धमा १८ मार्चसम्म उनीहरु मारिएको जनाएको छ।
अधिकांश हताहतहरू बिस्फोटक हतियारहरू जस्तै तोपखाना र रकेट प्रणालीहरू, मिसाइल र हवाई हमलाहरूबाट भएको जनाइएको छ।
देशमा ठूलो अनुगमन टोली भएको ओएचसीएचआरले युद्ध प्रभावित केही सहरहरूबाट हताहतको रिपोर्टहरू प्रमाणित गर्न बाँकी रहेको वास्तविक मृतकको संख्या यो भन्दा धेरै हुने जनाएको छ।
रुससँग वार्ता विफल भए तेस्रो विश्वयुद्ध: युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी अतिक्रमण अन्त्य गराउने वार्ता विफल हुनुको अर्थ ‘तृतीय विश्वयुद्ध’ हुने बताएका छन्।
सीएनएन टेलिभिजनसँग आइतबार कुरा गर्दै जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न आफू तयार रहेको जनाए। जारी लडाइँ अन्त्य गर्ने एउटै बाटो भनेको वार्ताहरू भएको कुरामा आफ्नो विश्वास रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
मलाई लाग्छ सहमति गर्ने सम्भावना पहिल्याउनका निम्ति जुनसुकै स्वरूप, अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ, जेलेन्स्कीले भने।यद्यपि रुससमर्थित पृथकतावादीको पकडमा रहेका क्षेत्रहरूलाई युक्रेनले स्वतन्त्र भएको मान्यता दिनुपर्ने कुनै सम्झौतामा सहमति जनाउन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
जेलेन्स्कीका अनुसार युक्रेन उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको सदस्य भएको भए युद्ध शुरू हुने थिएन। नेटोका सदस्य राष्ट्रहरू हामीलाई आफ्नो गठबन्धनमा हेर्न तयार छन् भने त्यो तत्काल गर्नुपर्‍यो।
किनकि हरेक दिन मानिसहरू मरिरहेका छन्’ उनले भने । तेस्तै, रुस–युक्रेनबीच २६ दिनयता जारी द्वन्द्वका बीच तेस्रो विश्व युद्ध हुन लागेको हो त ? भन्ने प्रश्नहरु आम मानिसमा उब्जिएका छन्।
यसैक्रममा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि हाल रुस र युक्रेनबीच द्वन्द्व रोक्ने गरी जारी रहेको वार्ता विफल भएको खण्डमा ‘तेस्रो विश्वयुद्ध’ निम्तनसक्ने बताएका छन्।
सीएनएन टेलिभिजनसँग आइतबार कुरा गर्दै जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै वार्ता विफल भए तेस्रो विश्वयुद्ध हुनसक्ने बताएका हुन्।
जारी लडाइँ अन्त्य गर्ने उपाय वार्ता नै भएकाले वार्ताबाटै हल खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर उनले तेस्रो विश्वयुद्ध कसरी हुनसक्छ स्पष्ट पारेनन्।